Saynisyahannadu waxay dhiseen caleemo macmal ah oo qorraxdu u rogi karto dawo - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Saynisyahannada waxay dhiseen caleemo macmal ah oo qorraxdu u rogi karto dawo - BGR
Saynisyahannada waxay dhiseen caleemo macmal ah oo qorraxdu u rogi karto dawo - BGR
Qorraxdayadu waa il la yaab leh oo aad u tiro badan oo aan hadda bilownay inaan barano si looga faa'iideysto. Dhirtu, dhanka kale, waxay si buuxda u maareyaan tamarta bilaashka ah ee ay bixiso cirka, sidaa darteed waa wax dabiici ah in saynisyahannadu ka qaataan dhiirrigelinta isha ilbahan.
hadda dadaal joogto ah baarayaasha kooxda Eindhoven. Jaamacadda Teknolojiyadda ayaa soo saartay nooc cusub oo xayeysiis ah oo ku saabsan warqad-farsameed. Sida caleemo dabiiciga ah, caleemaha aan dabiiciga aheyn waxay nuugaan iftiinka qorraxda waxayna u isticmaalaan inay abuuraan wax cusub. Adeegyadan yar-yar, halkii ay shidaalka uga abuuri lahaayeen warshad nool, waxay u soo saari karaan dawooyin aadanaha.
Nidaamkan caleemo dabiici ah in muddo ah, oo marka hore soo bandhigaya tusaalaha 2016. Hada tikniyoolajiyaddu waa ay fiicnaatay cilmi baarayaashu waxay yiraahdeen caleenta midabka been abuurka ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro kaliya nooc kasta oo daawo loo malayn karo.
Astaamaha Hooyada, astaamayaasha yar-yar waxay adeegsadaan kanaallo adag oo u qulqulaya sida xididdada caleemaha. Marka qorraxdu ku garaacdo waxoogaa cabitaan ah caleemaha, waxay kicisaa fal-celin kiimikaad. Waa geedi socod caadi ahaan u baahan doona koronto, kiimikooyin sun ah, ama labadaba, laakiin adoo adeegsanaya iftiinka qorraxda si loogu kabo soo saarista daroogada, waxay noqotaa mid sii waara.
Saynisyahanada ayaa ka fiirsanaya adeegsiga nidaamyada noocan ah meelaha ay dawadu ka gaaban tahay. Way adag tahay in la soo saaro oo laga soo saaro maxalliga. Horusocodkan, waxaa aad u fududaan lahayd in la soo saaro dawooyinka lidka ku ah jiirarka iyada oo aan la marin koronto.
Timothy Noel, oo hogaaminaya cilmi-baarista ayaa yidhi "Ma jiraan wax carqalad ah oo la xidhiidha sidii farsamadaan loo hirgalin lahaa oo aan ahayn xaqiiqda ah inay shaqayso maalintii oo keliya," ayuu yidhi Timothy Noel, oo cilmi-baadhistan hoggaaminaya. ayaa lagu yiri bayaanka . Caleemaha farshaxanku si fiican ayey u kala jajaban yihiin; meesha ay qorraxdu jirto, way shaqaysaa. Kireystayaasha si fudud ayaa loo cabiri karaa oo, dabeecadooda jaban iyo is-haysashada ay ku habboon yihiin soosaarka qiimaha badan ee kiimikada qorraxda. "
Tijaabooyinka daroogada waxay muujinayaan inay suurtagal tahay in la beddelo da'da bayoolojiga - BGR
Maalintii Alain Delon wuxuu "ka baqay geeri" sababta oo ah
Meghan Markle, oo ah haweeney astaan ​​geesinimo leh sida sawirka hogaaminaya ayaa shaaca ka qaaday inay tahay taageere weyn & # 039;
DADKA & LIFESTYLE5,959